Aoka tsy ho fanapahan-kevitry ny fitondrana irery ilay lalàna mifehy ny mpanohitra, hoy izy, fa hifampidinihana sy iadian-kevitra tsara. Fototra iorenan’ny demokrasia ao amin’ny firenena iray ny fisian’ny mpanohitra izay tsy hidina an-dalambe lava na hanongam-panjakana fa kosa arofanina ho an’ny mpitondra. Amin’ny tany demokratika, dia anisan’ny fototra ijoroan’ny demokrasia raha tena mandala azy fa tsy sarintsariny fotsiny (Démocratie de façade) ny fanekena fa misy ny mpanohitra eto amin’ny firenena. “Hatraiza ny fahasahiantsika fanjakana manokatra izany amin’ny adihevitra lehibe ?”, hoy izy. Raha tsy hiady hevitra amin’ny mpanao politika mantsy fa ny fanjakana irery sy ny antenimiera no handidy sy hanapaka ny lalàna momba ny fanoherana dia mety handeha ila ihany. Manentana ny rehetra hanana fahalalahan-tsaina sy hanana faharetana i Rivo Rakotovao. Anisan’ny tandindon’ny demokrasia ny hoe androany ianao mety ho mpitondra fa rahampitso mety ho mpanohitra, hoy izy. Afaka miresaka isika na tsy mitovy hevitra aza. Ny tombontsoan’ny firenena no ambony indrindra. Farafahakeliny in’efatra niantso manokana ny praiminisitra Ntsay Christian izy mba hampita amin’ny fahefana mpanatanteraka ny maha zava-dehibe ny fiaraha-midinika momba ny lalàna mifehy ny mpanohitra fa tsy sanatria atao bontolo ny fikitihana sy fandaniana azy. Tsy sanatria atao fitaovana politika io lalàna io na hampanjakana ny hevitry ny fironana tokana na antoko tokana na olon-tokana fa tena zavatra mipetraka hahasoa ny firenena. Aiza ilay olona no haneho ny heviny kanefa izay kianjan’ny demokrasia izay efa antsika, miroso anatin’ny tsy fitovian-kevitra, kanefa afaka miara-miaina ? Mandeha ila ihany mantsy ny demokrasia raha tsy tafapetraka amin’ny tokony hoy izy ny fanoherana eto. Tena mila maharitra isika mandinika azy io, hoy i Rivo Rakotovao ary vonona ny antenimierandoholona hiresaka amin’ny solombavambahoaka sy ny antoko politika mba handaminana ny lalàna mifehy ny mpanohitra. Ankoatra ny lalàna mifehy ny fanoherana, dia fandaharam-potoana ihany koa ny hanoloran’ny praiminisitra ny programa ankapoben’ny fanjakana.